Jilaa Marekanka ah oo ku guuleystay ol ole uu dhaqaalo ugu uruurinayay dadka Soomaaliyeed ee ay abaartu saameysay | RBC Radio
Jilaa Marekanka ah oo ku guuleystay ol ole uu dhaqaalo ugu uruurinayay dadka Soomaaliyeed ee ay abaartu saameysay
Gaalkacyo (RBC Radio) Jilaaga caanka ah ee Ben stiller oo u dhashay dalka Marekanka ayaa ku guuleystay ol ole uu ku dooneyay in lugu caawiyo dadka Soomaaliyeed ee ay abaartu ku dhufatay.
Ben stiller ayaa baraha bulshada ku baahiyay maalmo ka hor muuqal uu uga hadlayo xaaladda muragada leh ee ka taagan Soomaaliya,asagoo marka sheegay inay naxdin ku beertay carruur yar yar oo gaajo ugu dhimanaya gudaha Soomaaliya.
Dadka taageerra iyo bulshada caalamka ayuu ka dalbaday inay gacan ku siiyaan ol olaha uu ku doonayo inuu gargaar ku gaarsiyo Soomaaliyo,si loo badbaadiyo carruurta iyo dadka kale ee abaarta u dhimanaya.
Stiller waxaa kalo uu marka codsi u diray shirkadda diyaaradaha ee Turkish Airlines ,asagoo usoo jeediyay inay ugu deeqdo diyaarad gargaar garsiisa Soomaaliya,maaddama shirkaddu ay tahay tan kaliya ee caalamiga ah oo duulimaad ku tagta Soomaaliya.
Kumanaan taageerrayaasha jilaga ah ayaa baahiyay dalabka uu shirkadda u diray,markiiba Turkish Airlines waxaa ay ka soo jawaabtay dalabka iyagoo sheegay inay ku deeqayaan diyaarad weyn oo Soomaaliya garsiin doonta gargaarka la aruurinayo.
Wax ka yar labo maalin ayuu jilaaga,Ben stiller wuxuu ku aruuriyay lacag dhan 1.4 million oo doollarka Marekanka,waxaana lacagta loo badali doona gargaar lugu taageerrayo dadka Soomaaliyeed ee abaarta la daala-dhacaya.
Dad kale oo caan ah ayaa taageerray ol olaha Ben stiller ,waxaana lugu ammaanay sida bini’aadanimada leh ee uu uga dan-qaday dadka ku dhibaateysan Soomaaliya ee abaarta la daala-dhacaya tan iyo sanadkii 2014.